के मस्तिष्क पनि बिरामी हुन्छ ? - Birgunj Sanjalके मस्तिष्क पनि बिरामी हुन्छ ? - Birgunj Sanjalके मस्तिष्क पनि बिरामी हुन्छ ? - Birgunj Sanjal
के मस्तिष्क पनि बिरामी हुन्छ ?
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १८:०२
एजेन्सी | विश्वव्यापी कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभरी नै लकडाउन जारी गरिएको छ । लकडाउनका कारण थुप्रै व्यक्तिहरु डिप्रेशनको शिकार भएका पछिल्लो तथ्याकंले देखाएको छ । भारत, नेपाल लगायतका मुलुकमा डिप्रेशनका बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । के दिमाग बिरामी भएर मानिसहरुमा डिप्रेशन भएको हो त ? के दिमाग पनि बिरामी हुन्छ त ?
शरीरका अन्य अंगहरु जस्तै मस्तिष्कमा पनि समस्याहरु आउन सक्छ । जुन पछि गएर मानसिक रोगको रुपमा विकसित हुन्छ । ‘के तपाईं खुशी हुनुहुन्छ ?’ विषयक गोष्ठीमा मनोवैज्ञानिक चिकित्सक निवेदिता सिंहले मानसिक बिरामीको सम्बन्धमा बताएकी छिन् । उनले मानसिक बिरामीको विषयमा धेरै मानिसहरुले स्वीकार नगर्ने बताएकी छिन् ।
तर, हाम्रो अगाडि यस्ता चुनौतिहरु आइपर्छन् जसले दिमागमा सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाई पोलर, अत्यधिक चिन्ता जस्ता रोगहरु लगाउँछ । यस्तो अवस्थामा मनोवैज्ञानिक सल्लाहको आवश्यकता पर्छ । उनले अगाडि भनिन्, ‘आजभोलि मानसिक स्वास्थ्य र मनोरोगलाई लिएर विभिन्न भ्रमहरु पैदा भएका छन् । तर, मानिसहरु शरीरको अन्य अंगजस्तै मस्तिष्क पनि बिरामी हुन्छ ।’